कालो बीन सूप (फ्रीजर मैत्री!) - व्यंजनहरु
कति ताजा पालक बराबर 1 कप पकाएको
यसले पूरै कुखुराको फोका लिन कति समय लाग्छ?
यसले कुखुराको पखेटा उमाल्न कहिले लिन सक्दछ
जहाँ म फ्रान्सेली डुब स्यान्डविच पाउन सक्छु
तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ जब सॉसेज पकाइन्छ
कालो बीन सूप
यो कालो बीन सूप रेसिपी मोटो र हार्दिक मनपर्ने टनको स्वादको साथ छ। कालो गेडाहरू, सब्जीहरू, र श्रोदर सिमरले हाम्रो मनपर्ने बोल्ड मसलाइको साथ एक स्वादिष्ट र सजिलो सूपको लागि!
खट्टा क्रीम को एक dollop, बेकन को एक छर्कने, र तपाइँको मनपर्ने ताजा जडीबूटि वा काटिएको हरियो प्याजको साथ सेवा गर्नुहोस्।
हामी किन यो सूपलाई माया गर्छौं
यो हो छिटो बनाउन को लागी !
यो भारी र क्रीमयुक्त, भारी क्रीमको थप बिना र शाकाहारी र फाइबरले भरिएको छ भने टेक्नेसन्ट स्वाद लिदै।
पनेरा ब्ल्याक बीन सूप सँधै मनपर्ने भएको छ र यो हालै बन्द गरिएको छ, मैले स्वीकार्नु पर्दछ, म यो संस्करण रुचाउँछु!
यो शाकाहारी, बेकन, सिमी, र मसलाले भरिएको बजेट-अनुकूल सूप हो, र तपाईं आफ्नो सबै मनपर्ने टप्पिंगहरूसँग गार्निश गर्न सक्नुहुनेछ!
सामग्री / भिन्नताहरू
कालो गेडाहरू यस सूपको तारा हुन्! क्यान्ड गेडाहरू अतिरिक्त छिटो सूपको लागि बनाउँदछन् तर मैले सुक्खा फलियाँहरूका लागि दिशाहरू समावेश गरेको छु यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने।
बेल मिर्च, प्याज, अजवाइन, र टमाटर एक बीरो संग एक हार्दिक, भरने सूप सिर्जना गर्न सिमी बनाईएको छ। तपाईंसँग हातैले जे छ, मसरूम, zucchini, मकै, वा पालक जोड्नुहोस्!
खुर्सानी को धुलो , पेपरिका, र जीरा सबै सँगसँगै सिमर्ड छन् शोरबा स्वादहरू सँगै मिश्रण सम्म! तपाईंको आफ्नै थप्नुहोस् टाको मसाला , fajita मसाला , वा पनि काजुन मसाला , तपाईले जे चाहानुहुन्छ!
कालो बीन सूप कसरी बनाउने
यो सजिलो रेसिपी केहि समय मा तयार हुनेछ!
पहिले बेकन साउट गर्नुहोस्, (वा प्रयास गर्नुहोस् मा यो बनाउने ओभन ) र टिपकाउने भेजीमा पकाउनुहोस्।
बाँकी सामग्रीहरू थप्नुहोस् (तल प्रति नुस्खा) र २० मिनेट उमालेर।
तेज पात हटाउनुहोस् र बनावटलाई मोटो र क्रीमी बनाउन सूपको एक भाग मिलाउनुहोस्।
मिक्स-ईन र Toppings
कालो बीन सूप पनि केही मिक्स इन र toppings को साथ सुन्दर र स्वादको बनाइएको छ! स्वादिष्ट एड-इनहरूको कचौरा बाहिर राख्नुहोस् र सबैलाई तिनीहरूको कालो बीन सूप बनाउन दिनुहोस्!
क्रेडेड चेडर चीज वा क्रुम्बल कोटिजा चीज
Tortilla स्ट्रिप्स वा कर्नब्रेड crumbles
एवोकैडो स्लाइसहरू र काटिएको कालो जैतुनहरू
काटिएको jalapenos वा पाकेको हरियो चिलीहरू
साल्सा र खट्टा क्रीम
ग्व्याकोमोल वा नाचो चीज
ड्रेन र कुल्ला क्यान्सन वास्तवमै राम्रोसँग सबै नुन र फोम थप्नको लागि जोड्नु अघि।
बनावटको लागि सिमी र भेजीहरूको केही छोपेर सूपको भाग ब्लेन्ड गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको सूप अति मोटो छ भने, शोरबा थप्नुहोस् (एक पटक मा एक सानो) र त्यस अनुसार आफ्नो मसला समायोजित गर्नुहोस्।
बाँया ओभरहरू फ्रिजमा ti-। दिनसम्म एयरटाइट कन्टेनरमा भण्डार गर्न सकिन्छ।
पुनः गरम गर्न, स्टोभमा उकासाउनुहोस् वा माइक्रोवेभमा १-२ मिनेट वा यसको तता नभएसम्म ताप्नुहोस्।
कालो बीन सूप स्थिर गर्न सकिन्छ। पूर्ण रूपमा शीत गर्नुहोस्, त्यसपछि फ्रिजर झोलामा राख्नुहोस् र फ्रिजमा फ्ल्याट गर्नुहोस् (फ्रिजरमा months महिनासम्म राख्छ)।
हार्दिक सूप्स प्रयास गर्न
टाको सूप रेसिपी - -०-मिनेटको खाना
क्रोकपट आलु र सॉसेज सूप - यसलाई सेट गर्नुहोस् र यो बिर्सनुहोस्
बीफ र मकारोनी सूप - स्वाद भरिएको
चिकन जंगली चामल सूप - ताजा शाकाहारीहरूले भरिएको
इटालियन बीन सूप - हार्दिक र भरिने
चिकन सूपको घरेलु क्रीम - एक-भाँडो खाना!
के तपाईंको परिवारले यो कालो बिन सूप मनपरायो? एक टिप्पणी र रेटिंग तल निश्चित छोड्नुहोस्!
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय० मिनेट कुल समयचार मिनेट सर्भिंगहरू। लेखकहोली निल्सन यो सूप हार्दिक, रमाईलो छ र चिसो दिनमा तपाईंलाई भित्रबाट तातो पार्नेछ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। स्लाइसहरू बेकन काटिएको, वा १ चम्मच मक्खन
▢एक ठूलो प्याज काटिएको
▢एक कप अजवाइन काटिएको
▢१ ½ कप घण्टी मिर्च (कुनै पनि रंग) राम्ररी पासा
▢। लसुन लौंग कीमा
▢१ औन्स पाकेको टमाटर रस संग
▢दुई चम्मच जीरा
▢दुई चम्मच खुर्सानी को धुलो
▢½ चम्मच धूम्रपान पेपरिका
▢एक jalapeno मिर्च रोपेको, बारीक पाकेको
▢दुई कप कुखुराको ब्रोथ कम सोडियम
▢दुई डिब्बा कालो सिमी १ औंस प्रत्येक, निकासी र कुले
▢खट्टा क्रीम, हरियो प्याज, कोथिलो वैकल्पिक
ठूलो सास प्यान तताउनुहोस् र बेकन थप गर्नुहोस्। मध्यम गर्मी मा कुरकुरे सम्म कुक। प्यानबाट हटाउनुहोस् र एकतिर सेट गर्नुहोस् (फ्याट रिजर्भ गर्दै।)
प्याज, अजवाइन, बेल मिर्च, र लसुन बेकन बोसो मा थप्नुहोस् र मध्यम गर्मी मा न्यानो सम्म पकाउनुहोस्।
बाँकी अवयवहरू (बेकन बाहेक) मा चलाउनुहोस् र फोकामा ल्याउनुहोस्। गर्मी घटाउनुहोस्, कभर गर्नुहोस्, र २० मिनेट सिम गर्नुहोस्।
तेज पात हटाउनुहोस् र रद्द गर्नुहोस्। एक विसर्जन ब्लेन्डर प्रयोग गरेर, सौंफको मिश्रण को आधा मोटा गाढा गर्न को लागि मिश्रण। जोड्नको लागि हलचल र बेकन मा थप्न।
यदि चाहियो भने खट्टा क्रीम, कोथिलो, र हरियो प्याजको साथ सेवा गर्नुहोस्।
सुकेको गेडाहरू प्रयोग गर्न, क्यान्ड गेडाहरू छोड्नुहोस्। प्लेस ½ पाउन्ड बीन्स ठूलो सास प्यानमा साथ साथै १ ठूलो प्याज आधा र २ लसुन पूरै। पानीले छोप्नुहोस्, मध्यम-उच्च तातोमा उमालेर ल्याउनुहोस्। तताउने र कभर गर्मी घटाउनुहोस्। सिमी कोमल नभएसम्म उडान, about ० मिनेट। (यदि आवश्यक भएमा थप पानी थप्नुहोस्)।
क्यालोरिज:9२,कार्बोहाइड्रेट:। 44g,प्रोटिन:१g,मोटो:१०g,पागलिएको बोसो:3g,कोलेस्ट्रॉल:पन्ध्रमिलीग्राम,सोडियम:6262२मिलीग्राम,पोटासियम:१०66मिलीग्राम,फाइबर:पन्ध्रg,चिनी:।g,भिटामिन ए:२4949IU,भिटामिन सी:97मिलीग्राम,क्यालसियम:११२मिलीग्राम,फलाम:।मिलीग्राम
कीवर्डसबै भन्दा राम्रो कालो बिन सूप नुस्खा, कालो बीन सूप, कालो बीन सूप नुस्खा, कसरी कालो बीन सूप बनाउने। कोर्सएपेटाइजर, डिनर, एन्ट्री, लन्च, मेन कोर्स, सूप पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
नि: शुल्क मुद्रण योग्य लंचबक्स नोटहरू + १ Insp प्रेरणादायक लन्चबक्स विचारहरू
Cheesy Garlic Breadsticks!
फ्रेन्च टोस्ट रोल अप
एप्पल पाई स्पाइस
एक पकाउने प्यानको ठाउँमा के प्रयोग गर्ने
एयर फ्रायर सम्पूर्ण चिकन
होममेड वर वोन टोन सूप
प्रतिलिपि बिरालो क्र्याकर ब्यारेल हेशब्रोन क्यासरोल रेसिपी
Crayon हटाउने तरिकाहरू!